အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တရုတ်ဟင်းနောက်ဆက်တွဲ (မနက်စာ)
Posted by တီချမ်း at 5:08 AM
Bino December 12, 2009 at 8:24 AM
I don't like ready made noodle.
I like your hand cooking.
If I haveachance, I'll surely come to you.
အန်တီချမ်း December 12, 2009 at 1:36 PM
12 Dec 09, 12:42
EEK: Good. အိုင်ဒီယာ ကော်ပီကုးပြီး မုန့် ဟင်းခါးဖတ်သုပ် စားလိုက်ဦးမယ်။
အန်တီချမ်း December 12, 2009 at 1:37 PM
ခေါက်ဆွဲကော ဖက်ထုပ်ကော လုပ်ကျွေးပါ့မယ်
အန်တီချမ်း December 13, 2009 at 10:06 PM
13 Dec 09, 21:41
LB: အိူကေ အိမ်ကကောင်တွေတော့ ငါ့လက်တည့်စမ်းသပ်ဟင်း ထပ်စားရတော့မယ် မကောင်းရင် ဒီဘလော့ဂ်မှာ လာအော်ကြ ဟီးဟီ
sweetpeony December 15, 2009 at 10:57 AM
တီးမစ်ကို ၂ထုပ်တောင် ဆိုတော့ ရင်တုန်တော့မှာပဲ...........